ဤကဗျာရှည်ကို ဖယောင်းတိုင်မီးဖြင့် ကျွန်ုပ်ရေးသည် |
အွန်လိုင်းပေါ် ကြုံလေသမျှ (၁) →
Posted on May 25, 2012 by mamyathway
Number of View: 20080
တရုပ် ယိုးဒယား၊ ကိုရီးယား ဂျပန်
“ မီးစက်နှိုးသံ တညံညံ
…လို့ ထပ်ပြီး စာချိုးရလောက်ရဲ့။
မီးမလာတဲ့ ရက်၊ လ၊ နှစ်တွေ
သူ့အမေ ပူကာ မငိုက်နိုင်ဘူး
နွေအခါ ဧရာဟု ဟိုတယ်မှာ
ဖယောင်းတိုင်နဲ့ နေပါ” ဆိုပြီး
ကင်းဝေးအောင် အရင် မဆောင်ရင်ဖြင့်
This entry was posted in ကဗျာ. Bookmark the permalink.
27 Responses to ဤကဗျာရှည်ကို ဖယောင်းတိုင်မီးဖြင့် ကျွန်ုပ်ရေးသည်
ဟဟဟားးးတိုက်ဆိုင်လိုက်တာ မြသွေးရယ်….။ ဒီကဗျာလေးနဲ့ တို့ ခံစားချက်တွေး))))
ဤကဗျာရှည်ကို ဖယောင်းတိုင်မီးဖြင့် ကျွန်ုပ်ဖတ်သွားသည်း)
အရမ်းကောင်းတယ် ဆရာမ။သက်ဆိုင်သူတွေ စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်သူတွေ ဒီကဗျာလေးကို ဖတ်မိရင်အရမ်းကောင်းမှာပဲ။
မြန်မာပြည်ကြီးတိုးတက်ပြီး လျှပ်စစ်မီးတွေ ထိန်ထိန်လင်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်။
သဘာဝ နေ အလင်းက ဖယောင်းတိုင်ထက် ပိုလင်းတယ်
မျက်စိ အားစိုက်ရလည်း သက်သာတယ်
အပေါ်က ကော်မန့် က စတာနော်
ကဗျာကို ရင်ထဲက ဖတ်သွားပါတယ်
ကဗျာလေး ဖတ်ကောင်းတယ် အစ်မရေး)
ညီမလေးလည်း မမရဲ့ရင်ထဲကစကားသံတွေလေးတွေကို ခံစားချက်အတူတူ. မို့
ဖယောင်းတိုင်မီးလေးနဲ့ ဖတ်သွားပါတယ်။ ငုံ့ကြည့်လိုက်တော့ ဖယောင်းစက်တွေက
ကောင်းလိုက်တဲ့ ကဗျာ..၊ မျက်မှောက်ကို လက်ထောက်ချလိုက် သလိုပါပဲ မမြသွေးနီရေ..၊
၂၁ ရာစု ရောက်နေပြီ၊ သူများတွေက အိုင်တီခေတ်ထဲ အလုအယက် တီထွင်နေကြချိန်မှာ ကျနော်တို့က မီးကလေး မှန်မှန်ရဖို့ကိုပဲ တောင်းနေရတုန်း…။
လက်တွေ့ကျကျဖယောင်းတိုင်မီးနဲ့ရေးတဲ့ ဖယောင်းတိုင်ထွန်းပြီးနေရတဲ့ ဘဝတွေအကြောင်း… ရင်ထဲကိုတိုက်ရိုက်ထိတယ်….
မေဇွန် (STA) says:
ဖြစ်ပျက်နေတာတွေ အားလုံးကို ပါအောင်.မှန်အောင်ရေးဖွဲ့နိုင်တဲ့ ငါ့အစ်မအတွက်စကားကတော့ “ဟိုက်ရှားဘား……..မှန်လှချည်လား” …
ကိုယ်ချင်းစာတယ် ရာသီပူပူမှာ အဲ့လို ဒဏ်တွေ ခံရတာမသက်သာ ရန်ကုန်မှာ ၂ လလောက်တစ်ခါနေဖူးတာ ရေကို ၆ ထပ်ကိုဆွဲပြီး ချိုးရတဲ့အဖြစ် တော်တော့ဟဲ့ မီးး(
ရန်ကုန်လေထုကတော့ သန့်စင်ရေးလုပ်ဖို့ရမလွယ်… မီးရေးထင်းရေးကျပြန်တော့လည်း ပိုက်ဆံထည့်တော့မှ ပိုက်ထဲကရေထွက်…. ဖယောင်းတိုင်ဈေးက ခေါင်ခိုက်… မတ်တပ်စာသာရှာလို့ရပြီး တုန်းလုံးစာမရှိတဲ့ လူတွေရဲ့ဘ၀…. မီးကပါ ဆိုးဆိုးလာဆိုလေတော့… အင်း… ဘာမှ ထပ်ရေးတော့ပါဘူး။ ကဗျာလေးကတော့ တစ်ကယ့်ကို အသက်ဝင်ပါတယ် အစ်မ မြသွေးနီ ခင်ဗျာ။
ရင်ကိုထိရှလှတဲ့ ဤကဗျာရှည်ကို ဖယောင်းတိုင်မီးဖြင့် ညီမလည်း ဖတ်သွားပါသည်
မီးမရှိရင် ဒီဘက်ခောတ်မှာ နေရထိုင်ရတာ လုံးဝ အဆင်မပြေနိုင်ဘူး… မီးလေးမှန်မှန်ရဖို့ အမြဲ ဆုတောင်းနေမိတယ်…
ပြည်သူတွေ စိတ်ရှည်လက်ရှည် နားလည်သည်းခံပြီး စောင့်နေခဲ့ရတာ ဘယ်လောက်တောင် ကြာခဲ့ပြီလဲ။ တနှစ်ပြီး တနှစ် နွေရောက်မှာကို ကြောက်တဲ့စိတ်တွေ ၀င်လာတာ သဘာဝရာသီဥတု ပူတဲ့ ဒဏ်တခုထဲကြောင့်မှ မဟုတ်တာပဲ။
ဖယောင်းတိုင်တောင် ချွေတာပြီး မှောင်ထဲမှာပဲ ကွန်မန့်ပေးဖို့ လုပ်ရင်း ဘက်ထရီအားကုန်သွားလို့ မီးလာတဲ့ထိစောင့်ပြီး ပြန်လာရေးတာပါ။ 🙂
ခေတ်နဲ့အမီ အနုပညာလက်ရာတစ်ခု ဖန်တီးနိုင်လိုက်တာကို လေးလေးစားစားချီးကျူးမိပါတယ်ခင်ဗျာ။
မီးမလာ၊ ရေမလာ၊ ပူလောင်အိုက်စက်တဲ့ ညတွေ…
ဤကဗျာရှည်ကို ဖယောင်းတိုင်မီးဖြင့် ကျွန်ုပ်ဖတ်သည်..
ကဗျာလေးက သိပ်ပီပြင်တာပဲ.. မီးအမြန်ပြန်လာစေဖို့ ညတိုင်းဆုတောင်းပေးနေပါတယ်.. မမမြသွေးနီ.. မြန်မာပြည်ကြီး.. ရွှေရောင်တ၀င်းဝင်း.. မီးလင်းလင်းနဲ့ အစဉ်ထာဝရ လှစေချင်တာပါပဲ..
ရှိတ်စပီယားကို သတိရသွားတယ် မီးခွက်နဲ့စားရေးလို့
ဖယောင်းလေးမှိတ်တုတ် မှိတ်တုတ် နဲ့..
အမအဆင်ပြေရင် ညီမ ကိုမေးလ်လေးအက်ပေးပါလားအမ
အမဂျီမေးလ် ညီမ မသိလို့ပါ..
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀နှစ်လောက်ကတည်းက မီးစက်က မီးခိုးငွေ့တွေ ရှူခဲ့ဖူးပါရဲ့ အစ်မရယ်။ ဘယ်တော့များမှ ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်တွေ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် တွေက လွတ်ပါ့မလဲလို့တွေးရင်း..
shwe yoke lwar says:
min nyinyi says:
LeaveaReply to ခရစ္စတလ် Cancel reply
ချစ်ခြင်းသည်သာ တစ်ကမ္ဘာဆိုသော်ငြား - 284105 hits
အကျွမ်းတ၀င်ရှိသောသူစိမ်းများ - 81779 hits